Ny lahatsoratr'i Grace Carter momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Grace Carter
Grace Carter dia mpanoratra teknolojia ao Academized ary AustraliaHelp tolotra. Miasa amin'ny fanatsarana ny fiovam-po izy ary mampivelatra ny tetika marketing. Ary koa, Grace dia mpanabe ao Fanampiana amin'ny andraikitra Psychology tranokala akademika.
Alakamisy, Jolay 19, 2018 Alarobia, Jolay 18, 2018 Grace Carter
Amin'ny famoronana atiny misy olona mahita fa mahaliana sy mifandraika dia azonao atao ny manatsara ny fahitana ny tranonkalanao amin'ny valin'ny fikarohana Google. Ny fanaovana izany dia hanampy anao hampiorina anao amin'ny fiovam-po sasany. Fa tsy ny fijerena fotsiny ny olona mijery ny entanao dia manome antoka fa mandray andraikitra izy ireo ary manome anao fiovam-po. Araho ireto torohevitra momba ny ecommerce fito ireto amin'ny famoronana atiny miova fo. Fantaro ny mpanjifanao Mba hamoronana atiny manova fo izay mila manana hevitra tsara dia tsara momba ny inona ianao